Ririnina any Thailand ~ Journey-Assist - Inona no ilainao ho fantatra amin'ny ririnina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Ririnina any Thailandy
Nahoana i Thailand?
Aiza ny ririnina any Thailand
Teti-bola amin'ny ririnina
Ririnina Visa any Thailand
Inona no azonao avotana?
Maninona raha mandeha amin'ny ririnina any Thailand
Ahoana no tianao amin'ity ririnina ity? 🙂
Ranomasina, masoandro voankazo - tombony lehibe izay mahasarika ny olona avy any amin'ny firenena mandefitra mankany amin'ity firenena ity amin'ny ririnina. Ireo tsy tia snow, hatsiaka sy sakafo mora dia manapa-kevitra ny hiala voly mandritra ny fotoana ela ao Thailand. Raha toa ny loharanom-bola karama tsy misy ifandraisany amin'ny toeram-ponenana ara-batana (asa lavitra na trano azo alofana mandritra ny dia), ny nofinofy amin'ny ririnina any amin'ireo tropika dia tsy sarotra ny mahatsapa.
Indrindra any Thailand, ny ririnina no be indrindra tsara fotoana mahafinaritra! (momba ny toetrandro sy ny toetr'andro any Thailandy amin'ny an-tsipiriany eto)
Na izany aza, io safidy io dia tsy mety amin'ny olon-drehetra. Ny sasany matahotra ny handeha any amin'ity firenena ity (na dia tsy azo antsoina aza ny tahotra ireo), ny sasany kosa dia tsy miorim-paka ary milamina. Noho izany antony izany dia voalaza fa ho avy eto mandritra ny fotoana fohy ary hijery manodidina alohan'ny handehanany amin'ny ririnina.
Isika ity firenena ity. Eto ianao dia afaka mahita resahin-dranomasina be dia be, nosy kely mangina, metropolis Bangkok, avaratry ny firenena misy tsangambato maro. Ny safidy ny toerana mandritra ny ririnina dia tsy arahin'entana manokana ihany.
Saingy ny nosy izay tena voafantina indrindra, ary koa ny tanàna any amoron-dranomasina, manana fotodrafitrasa tsara - misy fivarotana, barazy, klinika ary fivarotam-panafody. Ireto misy trano fandraisam-bahiny toy ny Phuket, Pattaya, Samui, Hua Hin. Misy ny zavatra rehetra ilainao mandritra ny fotoana maharitra. Ohatra, ny nosy Koh Samui dia mangina indrindra amin'ireo resorts rehetra voatanisa, fa miroborobo ny fotodrafitrasa tena tsara.
Ireo izay tsy tia manokana an-dranomasina dia afaka mandeha any amin'ny tapany avaratry ny firenena, izany hoe mankany Chiang Mai. Ao amin'ity tanàna ity dia afaka mifankahalala amin'ny kolontsaina Thai ianao. Betsaka ny mpizahantany vitsy kokoa eto. Bangkok dia tsy toerana tsara indrindra amin'ny ririnina noho ny tabataba sy ny fidradradradrana. Tsara kokoa ny mitsidika azy io mandritry ny andro vitsivitsy.
Ny trano fandraisam-bahiny samihafa dia aseho amin'ny haavon'ny vidiny. Ny lafo indrindra dia i Hua Hin, Bangkok sy Phuket. I Pattaya sy Samui dia azo antsoina hoe vidiny mirary. Ny faritra avaratra ao amin'ny firenena dia faly amin'ny vidiny ambany indrindra amin'ny trano, sakafo sy fitaterana.
Ny vidin'ny ririnina
Ny teti-bola satra amin'ny ririnina any Thailand dia $ 800-1000 isam-bolana (tsy ao anatin'ireo tapakila fiaramanidina). Any amin'ny tapany avaratra amin'ny firenena dia afaka mitazona 600 dolara ianao. Raha momba ny fahamaotinana anefa, na aiza na aiza eto amin'ity firenena ity dia afaka mitantana misy 800 dolara (any amin'ny faritra avaratra - na dia 500 dolara aza). Saingy, raha ny tsy fahampian'ny ririnina dia tsy azo inoana ny manavotra tena.
Maro ny fomba iainana honina, toy ny any an-kafa. Azonao atao ny mametra ny tenanao hanofa trano iray, mitaingina scooter, misakafo amin'ny trano fisotro tsy lafo, na afaka mipetraka amin'ny trano lehibe, manofa fiara mahafinaritra ary mihinana amin'ny trano fisakafoanana mahafinaritra. Noho izany, 800-1000 dolara any atsimo ary 600-800 any avaratra ihany no vidin'ny salan'isa amin'ny vidiny: tsy mahazo aina ny trano fa tsy manankarena. fanofa moto, fitsangatsanganana tsy miankina amin'ny toerana mahaliana, sakafo tsara ilain'ny ankamaroan'ny ao amin'ny kafe, fa koa amin'ny trano fisakafoanana (indraindray).
Nandritra ny volana voalohany, na aiza na aiza any Thailand, ny mpizahatany matetika dia mandany iray sy tapany in-droa mihoatra ny teti-bola salanisa: mila mividy fitaovana an-trano, ary koa mandoa vola hividianana sakafo sy fialamboly, mijery ny vidiny.
Misy safidy 2, tsirairay amin'izy ireo dia midika hoe miala amin'ny firenena mandritra ny fotoana fohy.
Ny safidy voalohany
Fahazoana visa mpizahatany any amin'ny firenenao, mijanona ao Thailandy mandritry ny 90 andro, aorian'izay dia mandeha any amin'ny firenena manodidina ianao ary mahazo visa visa mpizahatany. Ity safidy ity dia mitaky enim-bolana: visa roa 60 andro tsirairay ary roa fanitarana visa mandritra ny 30 andro.
Safidy faharoa (ho an'ny Rosiana ihany)
Ny fahatongavan-tena tsy misy visa eto amin'ity firenena ity mandritra ny 30 andro, avy eo dia iray na roa ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena rehetra any akaikin'i Thailandy hahazoana visa visa mpizahatany any amin'ny faritany. Raha atambatra dia maharitra maharitra efatra na fito volana: 30 andro hipetrahana tsy misy visa ary iray na roa mandritra ny 90 andro hipetrahana miaraka amin'ny visa, izay apetraka. Io safidy io dia mety kokoa satria ny consulat Thai izay hita ao Kambodza, Malaysia ary Laos dia mahatoky kokoa noho ny Moskoa, izay misy ny fandraisana ny fanatanterahana an-tsoratra amin'ny alàlan'ny firaketana elektronika, ny tapakila famerenana ny fividianana tapakila dia takiana, ny dikanteny voamarina avy amin'ny fanamarinana rehetra dia takiana, ary koa ny filaharana marina ny toerana misy azy ireo. . Ny lisitr'ireo antontan-taratasy feno ilaina amin'ny fampiharana iray ao amin'ny consulate any Moskoa dia voatanisa ao amin'ny vavahadin'ity consulat ity.
Mba hampihenana ny tetibola dia azonao atao:
Safidio ny trano fandraisam-bahiny izay tsy eny amin'ny ranomasina. Any amin'ny faritra avaratr'i Thailand (Chiang Mai, Chiang Rai, Pai) dia avo 1,5 heny kokoa ny fiainana raha oharina amin'ireo trano atsimo. Raha resaka fitsangatsanganana any Thailand ho ny ranomasina dia tokony mitady trano an-trano 30 minitra mandeha avy amin'ny tora-pasika ianao, fa tokony ho lavitra ny lalan'ny mpizahatany izany.
Mitadiava trano mandritra ny fotoana maharitra. Azonao atao ny mametraka efitrano fandraisam-bahiny iray monja amin'ny roa andro aorian'ny fahatongavananao, avelao ny valizyo, manofa scooter ianao ary hisafidy ny trano na condo tsara indrindra.
Tonga mialoha alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana ambony. Eo anelanelan'ny fiandohan'ny volana septambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana novambra, azo atao ny mitahiry tapakila ary mitady trano ho an'ny 10 000 baht izay mitentina 20 baht amin'ny volana desambra. Mandritra ny vanim-potoana avo dia miakatra avo roa heny ny vidiny, ary mandritra ny fialantsasatry ny taom-baovao - na telo aza. Fotoana avo dia ny vanim-potoana manomboka ny volana novambra ka aprily.
Fadio ny fividianana vokatra tsy mahazatra ho an'ity firenena ity. Ohatra ny ronono 1 litatra eto dia mahatratra 50 baht, fa ho amin'ity vola ity dia mety hahazo sakafo tsara ianao.
Mahandro tena, mividy vokatra efa vita, misakafo any amin'ny kafe iray fotsiny, fa mifidy trano mora kokoa.
Mividianan-tsakafo amin'ny barazy: mihena ny vidiny raha oharina amin'ireo trano fivarotana. Tsara kokoa ny misotro rano hosotroina mandritra ny filaharana amin'ny milina fivarotana: ny 1 litatra ny 1 litatra.
Mandeha bisikileta na fitateram-bahoaka.
Ity firenena ity dia azo raisina ho milamina. Ny tahan'ny heloka bevava eto anefa dia mbola avo noho ny any Japon sy China, fa ambany noho ny any Kambodza sy Vietnam. Miaraka amin'ny fitondran-tena mitombina, ny mety hiseho amin'ny "fidirana" ao anaty olana dia tsy misy fatra. Na izany aza, tokony hitandrina ny lalana any an-dàlana: Thailand dia isan'ireo mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny isan'ny lozam-pifamoivoizana.
Betsaka ny bibilava maro izay mampiseho ny tena loza noho ny tsy mampidi-doza, fa ny bibilava no tena matahotra ny olona noho ny vahoakany. Na izany aza, ianao dia afaka hihaona bibilava misy poizina akaikin'ny trano. Amin'ity tranga ity dia tokony hiantso ny tompon'ny trano ianao na ny iray amin'ireo mponina eo an-toerana.
Ny ririnina any Thailand dia fomba malaza hanoloana ny ririnina malefaka mangatsiaka amin'ny masoandro mafana Thai. Fa ny fampiharana azy io dia tsara kokoa aloha ho tonga aloha dia hifankahalala mandritra ny roa herinandro. Izany dia hanampy amin'ny fampahafantarana ireo tombony sy faharatsiana rehetra eo amin'ny fiainana ao an-toerana.
Somary lafo kely any ravina Thailand.
Eo amin'ny lafiny toekarena, saika ny antsasaky ny tombony ao Bali iray ihany.
Marina, misy ny vanim-potoana kely amin'ny ririnina. Na izany aza, misy toe-javatra tsara.